Forum serasera malagasy Ntsay - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Ntsay
rhaj0 - 04/06/2018 17:04
Louis Christian Ntsay. Le nouveau ministre du tourisme du gouvernement du premier ministre Jacques Sylla (nommé par le président Marc Ravalomanana) est un...
A mentionner que l’un de ses frères (de Cécile Manorohanta), Christian Ntsay, était déjà ministre du tourisme sous le régime d’Albert Zafy. Le benjamin de la famille, Abel Ntsay, était présumé être le ministre des sports lors du premier remaniement du gouvernement Roindefo.
Ny resaka rehetra dia hoe, technocrate i Ntsay: miasa @ OIT sa BIT izy teo.
Fa araka ny arsivy ireo ambony ireo, dia i Ntsay izany dia Zafiste sa/sy Ra8iste taloha???
Nefa indray, raha ny fianakams-n'i Ntsay izany dia TGVIstes.
Ka dia tsihaitsihay izany izy ity fa dia hiaraha-mahita eo ee...
Dreamlover14 - 05/06/2018 23:48
Izaho kosa aloha tsy hi-se baser @ izany lafin-kavana sns izany eh. Izaho zanaka olona nafana fo tao @ AREMA, ny anabaviko AREMA fa izaho anisany nitolona t@ 1991 ho @ fialan-dratsiraka.
Nifidy an'i Zafy Albert aho ary na dia niverina aza i Deba t@ 1996-97 dia tsy nqnohana an'i Deba.
Taty aoriana tonga Ravalo dia nifidy Ravalo aho, ilay anabaviko mbola nijanona Arema, avy eo izy nanohana an'i ANR tao @ ville de Tanà. Mbola TGV hiringiriny hatr@ izao? Ka raha izaho ohatra ve no lasa PM dia iza no lazainao fa antoko niaviako raha tsy mbola niditra antoko politika aho ? Arema (nisy ny RAD) sa TGV (misy ny Anabaviko) sa TIM izay hitako metimety kokoa amiko ?
Tsy zazakely akory ilay PM eto an, olona efa nandalo poste ministériel izany manana ny maha-izy azy.
rhaj0 - 06/06/2018 02:46
Marina ny anao. Koa na izaho koa kay toa anao. Ny rahalahiko toa TGViste. Izaho nefa tena allergique lozabe @ ireo (mpanohana) mpanongam-panjakana ireo.
Fanefa indray, isika dia olom-pirenena tsotra. Izaho manko ee.. asa ianao. Fa raha ny debadeba ksoany, dia, raha ny fahitako azy aloha, dia mavesa-danja ilay "famille (manao) politique".
Mahalana dia mahalana no misy hoe, iray fianakams akaiky, nefa mpifahavalo politika.
tovorandria - 29/07/2018 21:57
Izao izy robot an i panongam panjakana @ zay ko, ra tsy izany ve hangina le tolona teny1 @ 13mai, tena mampalahelo le firenena, ze mahay madainga, ze mahay mampiesona reetra d lasa filoha afaka mangoron Karena hanaovana trano erk izao tontolo izao daoly,enga anie mba ho tonga saina @ izay ireo vahoaka efa reraka sy mahantra ireo
mirananirina - 13/08/2018 14:04
Tsihaitsihay daholo fa azy aby ny antoko. Izay ilay politika
sonita - 23/10/2018 23:27
Asantsika mbola matoky an'ireo mpana politikan'ny saribakolim-bahiny am lainga sy valifaty ary fangoronan-karena ireo aloh, ka na hay na ntshay de aleo olom-baovao indray e.
hery - 04/01/2019 17:36
Efa voavaly tsara mihitsy izao ity amin'izao hoe iza no tena soavalin'i Ntsay.
Efa hay izy izao fa tsy hoe Ntsay intsony